Home / Blog / Miala tsiny fa manana ireo olana ireo ny trano fidiovana fa tsy olana amin'ny kalitao!
2020 / 12 / 12 FisokajianaBlog 4662 0
Tsy mora ho an'ny mpanjifa maro ny mividy trano, ary tsy mora velively ny fanavaozana trano, ary faly izy ireo miditra! Fa ny havana aman-tsakaiza kosa nilaza hoe ahoana no vaky ny faladianao amin'ny tongotra? Misy fiantraikany amin'ny hatsarana izany, manahirana anao, ary tena tsy mahazo aina. Ka kivy be ny tompony, vao mainka mieritreritra ny tsy mahazo aina, vao mainka tezitra. Mora amiko ve ny mandany vola be amin'ny fanavaozana?
Fotoana vitsy lasa izay, nisy vaovao hafa koa nipoaka: "efitrano fidiovana TOTO 150 no vaky ao amin'io distrika io ihany, hoy ny mpanamboatra fa misy olana tsy manara-penitra". Ao amin'ny distrika iray any amin'ny distrikan'i Chongqing, fianakaviana maherin'ny 150 no nahita triatra tao amin'ny trano fidiovany TOTO. Ny sasany dia vaky ny tanky, misy ny vaky trano, ary mbola mihoatra izany aza, ny fototr'ilay akorany dia nianjera tamin'ny sombin-javatra lehibe iray.
Ity karazana toe-javatra ity dia tsy maintsy maharary amin'ny tompony. Ny trano fidiovana dia trano fidiovana tsara, ahoana no hisehoan'ity toe-javatra ity. Tsy maintsy olana ara-kalitao izany. Noho izany, karazana fanaraha-maso santionany, fitarainana, amin'ny olan'ny magazay sns. Na izany na tsy izany, tsy azo very ny vola. Ary farany, ny valin'ny fitsapana ny santionany dia naseho fa: satria any amin'ny distrikan'i Chongqing no misy ny distrika, dia mangatsiaka be ny ririnina, ampiarahina amin'ireo vondron'olona fialan-tsasatry ny ririnina maharitra tsy onenana. Ny rano ao anaty trano fidiovana mandritra ny fotoana ela dia mitarika amin'ny gilasy, hany ka mihamangatsiaka sy vaky ny trano fidiovana, ary tsy misy ifandraisany ny kalitaon'ny trano fidiovana. Henon'ny tompony ity valiny ity, “tsy maina, maninona aho no manangona vola, miasa mafy mandritra ny androm-piainako, nohavaoziko fotsiny ny trano fidiovana, ahoana no hahatongavako toy izao! Mbola mila mahita ny olan'ny fivarotana ».
Ny mpanjifa rahateo tsy mpamorona matihanina, fitoeram-pidiovana famenoana miadana, ny fototr'ireo vaky ny tongotra, ny fametrahana ny fidiovana dia tsy mifanakaiky amin'ny rindrina, ny fandroana ny fidiovana eo anilan'ny harafesin'ny rano ao an-toerana Tadiavo avy hatrany ny fivarotana fandroana. “Manana olana ny trano fidianao!” Ny fandoavam-bola, ny fandoavam-bola, ny fandoavam-bola, ny zavatra manan-danja holazaina intelo. Karazana fitarainana isan-karazany hitakiana onitra! Matetika dia ny mpivarotra fivarotana terminal any amin'ny fandroana no iharan'ny tsy fanao. Ny trano fidiovana tsara trano hafa tsy misy olana. Fa maninona ianao no manana olana? Moana ihany ny mihinana ny mangidy!
Raha ny tena izy, miadana ny famenoana ny fitoeram-pivoahana, vaky ny fototr'ireo tongotra, ny fidiovana tsy azo apetraka amin'ny rindrina, ny tavin-drano fanasan-damba amin'ny volon'ny rano eo an-toerana, ny vaky no mivaingana. Imbetsaka izy io dia tsy olan'ny kalitaon'ny trano fidiovana!
Voalohany: miadana be ny vata fidiovana mameno ny rano
Raha misy lavaka fanidinana rano dia miadana be ny tsindrona rano. Zahao aloha ny tsindry rano. Raha kely loatra ny tsindry rano dia olana amin'ny famatsian-drano izany ary tsy misy ifandraisany amin'ny kalitaon'ny trano fidiovana. Raha ara-dalàna ny tsindry rano, azafady mba jereo raha ny vavahady fidiran-drano ao anaty fitoeran-drano no sakanan'ny potipoti-javatra. Raha misy dia mba esory ny fako.
Roa: aorian'ny fametrahana ny fidiovana mandritra ny fotoana maharitra dia misy triatra mipoitra eo am-pototry ny fotony ary hitatra
Taorian'ny fametrahana ny fidiovana mandritra ny fotoana maharitra dia misy triatra mipoitra eo am-pototry ny fotony ary hitatra. Io dia vokatry ny fametrahana azy, feno lavaka simenitra ny lavaka ifotony ary tsy misy ifandraisany amin'ny kalitaon'ny trano fidiovana . Ny simenitra dia handray rano ary hivelatra hamaky trano fidiovana. Ny fomba fametrahana marina dia: flange ho an'ny trano fidiovana iray. Misaraka amin'ny visy vita amin'ny tongotra, na amin'ny chassis fidiovana vita amin'ny silipo dia mety.
Telo: ny fametrahana ny kabine dia tsy afaka manakaiky ny rindrina
Taorian'ny fametrahana ny fidiovana amin'ny rindrina izay tsy manakaiky ny safidin'ny elanelan'ny fidiovana ary mijanona tsy lavitra amin'ny rindrina ny fantson-drano maloto, ary ny kalitaon'ny fidiovana dia tsy misy ifandraisany. Ny elanelam-pivoaran'ny fivoahan'ny fidiovana mahazatra dia 210mm, 305mm, 400mm famaritana telo. Amin'ny toe-javatra mahazatra dia avelao ny haben'ny fametrahana 190-210mm, 285-305mm, 380-400mm, izany hoe ao ambadiky ny trano fidiovana, avy amin'ny fahazoan'ny rindrina 20mm.
Ny mpampiasa dia tokony misafidy ny famaritana ny trano fidiovana arakaraka ny halaviran'ny rindrin'ny fantson-drano fitehirizana ao an-trano sy ny haben'ny fametrahana azy rehefa mividy. Raha maty sy tsy namboarina ny halaviran'ny fantsom-pivoahana avy amin'ny rindrina, dia tsy misy safidy fidiovana lavitra ho an'ny fantsakana, azonao atao ny mividy shifter 1 hafa hanamboarana. Ny Shifter dia mazàna mampitombo na mampihena ny afovoan'ny halaviran-toerana indrindra manodidina ny 100mm.
Efatra: manadio ny rano eo an-toerana ny rano eo an-toerana
Mampiasa fotoana lava ny kabine, mora miseho ny fidiovana amin'ny fandroana rano eo an-toerana ny harafesina eo an-toerana. Ny fanasana lamba fidiovana amin'ny rano eo an-toerana dia mihamainty ny rano eo an-toerana, tena misy fiantraikany amin'ny hatsarana, ny fampiasana koa dia tsy mahazo aina, manadio ary reraka. Matetika ity tompona toe-javatra ity dia mieritreritra fa olana ny kabine, raha ny tena izy, ny kalitaon'ny rano sy ny kalitaon'ny fidiovana dia tsy misy ifandraisany. Noho ny kalitaon'ny rano dia ho loto mavo eny ambonin'ny efi-trano ny trano fidiovana aorian'ny fampiasana elaela. Amin'izao fotoana izao, azonao atao ny mampiasa ilay mpanadio mba hikosehana, ary avy eo hosasana rano.
Dimy: vaky mangatsiaka ny fidiovana
Ny fitoeram-pidiovana fidiovana na ny famakiana azy, na ny fianjeran'ny gorodona manontolo, dia mety misy ifandraisany amin'ny zava-misy eo amin'ny tontolo iainana. Ohatra, ny ririnina dia mangatsiaka loatra, ny mari-pana anatiny dia ambany 0 degre, mihamangatsiaka ny rano voatahiry ao anaty fitoeram-pidiovana. Ny habetsaky ny ranomandry dia mety hitatra ka hihazona ny fitoeran-drano vaky. Raha tsy mampiasa trano fidiovana mandritra ny fotoana maharitra ny tompony dia tsy mikoriana mandritra ny fotoana maharitra ny rano ao anaty tanky, ary hampanginin'ny ranomandry mora vaky ny tanky.
Amin'ny dingan'ny fampiasana ny trano fidiovana dia misy trangan-javatra isan-karazany, ary takatra ny fanahiana an'ny tompony. Rehefa dinihina tokoa, ny ankamaroan'ny tompona niasa mafy nandritra ny antsasaky ny fiainana ho an'ity trano ity. Fa imbetsaka ny boaty fidiovana dia miadana mameno, vaky eo am-pototry ny faladiany, ny fidiovana apetraka amin'ny rindrina, ny fidiovana eo an-toerana ny harafesina eo an-toerana, mamaky volo, satria tsy mety ny fametrahana azy, fampiasana diso nateraky ny , ary ny kalitaon'ny kabine dia tsy misy ifandraisany. Voapanga tsy mety ny kabine. Amin'ity indray mitoraka ity dia mila manam-paharetana ny mpivarotra fivarotana fandroana manampy ny tompony hahita ny tena olana, ny tsara indrindra manampy ny tompony miaraka hamaha ny olana. Raha mbola tsy mazava ny mpanjifa dia azonao atao ny mametraka ity fanangonana WeChat ity. Vonona ny handefa ny mpanjifa hisorohana ny tsy fifankahazoan-kevitra tsy ilaina!
Olana amin'ny vokatra, tsy tadiavintsika rehetra. Ny mpivarotra dia mila mitazona ny toe-tsaina manompo mpanjifa tsara mba hiatrehana ny olana amin'izy ireo, ary ny mpanjifa koa mila mitazona fo mandefitra amin'ireo mpivarotra, rehefa dinihina tokoa, ny lazan'ireo mpanjifa no lazain'ny mpivarotra.
Previous :: Taorian'ny Nahitako Ilay Drafitra Doboka In-droa Tao An-tranon'olona Iray, dia Nialona aho! Next: Azo havaozina ny trano fidiovana !!! Ny trano fandroana dia ho fantatry ny olona